माईसेजतेरा बारे मलेसियाका सांसदले किन प्रश्न उठाए, तपाइको डाटा कति सुरक्षित? • raradiodarpan.com
माईसेजतेरा बारे मलेसियाका सांसदले किन प्रश्न उठाए, तपाइको डाटा कति सुरक्षित?
स्वास्थ्य मन्त्री खैरी जमालुद्दीनले आज सार्वजनिक रुपमा देखिदै आएको त्रास लाई कम गर्न खोजेका छन्। एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले भने कि कोविड १९ कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगको लागि प्रयोग गरिएका माईसेजाहटेरा एप्लिकेसन कुनै पनि निजी कम्पनीहरूलाई स्नवामित्वमा नदिएको बताएका छन्।
पोर्ट डिक्सन क्षेत्रका एक सांसद डातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यो विषय उठाएपछि उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एप्लिकेसनद्वारा ह्यान्डल गरिएका सबै मलेशियन नागरिकहरुको निजी डाटा पनि सुरक्षित रहेको बताए।
माई सेजेतारा द्वारा प्राप्त सबै डाटा सहित मुख्य प्रयोगकर्ताको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय (MoH) संग सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दाबि गरेका छन्। भने डाटा गोपनीयताको ग्यारेन्टी रहेको र MoH ले सधैं यो पक्षमा सम्झौता गरी संबेदनसिल रहेको उनले ट्विटर मार्फत जानकारी गराए।
व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि मात्र तपाईलाई रोजगार प्रस्ताव गरिएको कम्पनीमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्। कृपया भाउचर सङ्कलन गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईले काम गर्ने वा काम गरिरहनुभएको देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना नोट गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई आवश्यक हुँदा तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सजिलो बनाउँछ।
यस कागजातमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी नगद नदिनुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि तपाईले काम गरिरहनुभएको देश, तपाईले काम गरिरहनुभएको कम्पनी र तपाईलाई उपलब्ध गराइने सुविधाका बारेमा राम्ररी पढ्नुहोस्।
यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर मात्र नियम र सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। कृपया त्यसको प्रतिलिपि सुरक्षित रूपमा आफूसँग राख्नुहोस्। विदेशमा यात्रा गर्दा नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोस् किनकि तपाईलाई धोका हुने सम्भावना छ। यदि तपाईंलाई यस विज्ञापनको बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ भने, कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, तहचलमा सम्पर्क गर्नुहोस्।